वार्ताका लागि जोड दिने नेतामध्ये सबभन्दा अगाडि हाम्रो अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ (अन्तरवार्ता) | सहारा टाइम्स
Home » antrwarta » वार्ताका लागि जोड दिने नेतामध्ये सबभन्दा अगाडि हाम्रो अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ (अन्तरवार्ता)
वार्ताका लागि जोड दिने नेतामध्ये सबभन्दा अगाडि हाम्रो अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ (अन्तरवार्ता)
–कपलेश्वर यादव, केन्द्रीय सदस्य मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक
लामो समयदेखि विद्यार्थी राजनीतिक गर्नुभएका कपलेश्वर यादव विद्यार्थी राजनीतिमा एउटा खर्रो र स्पष्ट बोल्ने नेतामा पर्नु हुन्छ । आफूलाई लागेको कुरालाई जसरी पनि पूरा गर्ने हठी स्वभावका नेता यादव अब मुलधारको राजनीतिकमा प्रवेश गर्नुभएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकको विद्यार्थी अध्यक्ष उहाँ अब मुल पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा आउनु भएको छ, केन्द्रीय सदस्य बनेका यादवसँग सहारा टाइम्ससले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश
तपाईको पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको पनि दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, अब राजनीतिकमा आफ्नो भूमिका कसरी प्रस्तुत गर्छ ?
–म केन्द्रीय सदस्य बन्नुभन्दा पहिले विद्यार्थी राजनीतिमा थिए । म पार्टीको विद्यार्थी अध्यक्ष थिए । त्यसैले देशको मूलधार राजनीतिकभन्दा बढी विद्यार्थी राजनीतिकमा बढी ध्यान दिएका थिए । आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काममा बढी ध्यान दिएका कारण मुलधारको राजनीतिक बारे म त्यति स्पष्ट गर्न सक्दिन । अब विस्तारै यताको राजनीतिमा विस्तारै पस्दैछु । नेताहरुसँग संगत हुँदैछ । विराटनगरमा भएको महाधिवेशनमा म पनि केन्द्रीय सदस्यको लागि उम्मेदवारी दिएका थिए तर चुनाव भएन । पदाधिकारी चयनदेखि लिएर अन्य सदस्यहरुको छनोट गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षजीलाई नै दिइयो । तर एउटा कुरा चुनावबाट जितेर सदस्य वा केही बनेपछि त्यसको शान छुट्टै हुन्छ । त्यसको महत्व छुट्टै हुन्छ तर त्यस्तो भएन सबै जिम्मेवारी अध्यक्षलाई नै दिइयो । म पनि केन्द्रीय सदस्यमा हालै मनोनित भए ।
पार्टी सरकारमा गएको कुराप्रति महाधिवेशनमा कस्ता कस्ता कुरा उठे ?
–महाधिवेशनमा सहभागि भएपछि देशका थुप्रै राजनीतिक कुरा बुझ्ने मौका पाए । हाम्रो पार्टीलाई जुन प्रकारले मधेश विरोधीको आरोप लाग्दै आएको थियो त्यो कुरा मैले महाधिवेशनमा पाइनन् । महाधिवेशनमा २८ सय महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए कसैको मुखबाट यो पार्टी गलत गर्यो वा मधेशको विरुद्धमा गएको कुरा सुन्न पाइएन । ६४ जिल्लाको प्रतिनिधि भएका कारणले यो पार्टी राष्ट्रिय पहिचानको पार्टी भयो भने कुरा पुष्टि भयो । देशको राजनीतिक अहिले गोलमटोलमा गइरहेको छ । कसले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाइरहेका छन्, को प्रधानमन्त्री भइरहेका छन्, आज सरकार ढल्छ, भोली सरकार ढल्छ यही चर्चाहरु प्राय सुनिन्छ अहिलेको राजनीतिकमा । तर अरु जसले जे भनेपनि यी सबैको निकास दिने हाम्रै पार्टी नै हो । सायद हाम्रो पार्टीले भूमिका नखेलेको भए सविधान पनि निर्माण हुँदन्थ्यो । देश झन विकरालको अवस्थामा पुग्थ्यो र अहिले पनि हाम्रो पार्टीको त्यही नै आवश्यकता रहेको छ । र, तपाई हेर्दै जानु होला । अहिलको राजनीतिक केन्द्रविन्दुमा हाम्रै पार्टी हुन्छ र त्यसको निकास हाम्रै पार्टीले दिनेछ । सविधान जारी छ भयो तर सबैको माग त्यहाँ सम्बोधन भएन भनिएको छ । हाम्रो पार्टीले पनि अवाज उठाई रहेका छन् कि जहाँ जहाँ सविधानमा कुरा मिलेको छैन त्यहाँ मिलाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ८ बुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ । त्यसैले मधेशको बारेमा फोरम लोकतान्त्रिक गौण छ भन्नु गलत हो । टायर बालेर आन्दोलन गर्ने मात्र आन्दोलन हो त सरकार र सदनमा आन्दोलन गर्ने आन्दोलन होइन । त्यो पनि एक प्रकारको आन्दोलन नै हो । हाम्रो दल सरकार र सदमा संघर्ष गरिरहेको छ । मधेशको समस्या पहिचान गरेर अब बौद्धिक क्षेत्रले विद्रोह गर्नुपर्यो । सधै टायर बालेर चक्का जाम गरेर आन्दोलन हुँदैन ।
के बौद्धिक जगतले अहिलेको आन्दोलनमा साथ दिएका छैन त ?
–बौद्धिक जगत जसलाई हामी सिभिल सोसाइटी भन्छौ । पहिलो मधेश आन्दोलन हुँदा यी सिभिल सोसाइटीको नामो निशान थिएन । उनीहरु चाकरी चाप्लुसीमा लागेका थिए । मधेशलाई खाने भाँडो मात्र बनाए थिए । मधेशका युवा तथा मधेशका आन्दोलनमा उनीहरुको कुनै लगानी थिएन र अहिले पनि छैन । जति लगानी गरे त्यो भन्दा बढ्ता उठाएर खाइसकेका छन् । मधेशका राजनीतिलाई विगार्ने काम सिभिल सोशाइटीबाट पनि भएको हो । २४ वर्षदेखि निरन्तर राजनीतिकमा लागेको छु । ती सबै बुद्धिजिवीको नस नस थाह छ । को कति पानीमा छन् सबै थाह छन् । सविधान निर्माण भइसकेपछि अब मधेशलाई सही दिशा चाहिन्छ, त्यो दिने क्षमता कसैमा छैन । स्टार होटलहरुमा गएर ठूला ठूला गर्ने, यो नेतालाई उचाल्ने त्यसलाई पछार्ने जस्ता काम ती बुद्धिजिवीहरुबाट भएको छ । अब झगडा होइन, निकास दिने बाटो खोज्नु पर्यो । अब जारी भइसकेको सविधान कसैले खारेज गर्न सक्दैन बरु त्यसलाई अझ राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ । कहाँ कहाँ संशोधन गर्न सकिन्छ त्यसलाई पहिचान गरि अगाडि बढौं त्यसमा मेरो पार्टी पूर्ण समर्थन दिन तयार छ तर विभिन्न स्वार्थ राखेर आन्दोलन गर्दैमा कुनै समस्या समाधान हुँदैन ।
युवाहरु नेतृत्वमा नआउनुको कारण के हो ?
–मुख्य कुरा त युवाले पनि एक एकाको नेतृत्वलाई स्वीकार गरिरहेका छैन । जो पनि अलिकति नेतृत्व पंक्तिमा छन् । अगाडि आएका छन् ती सबै आआफ्नै क्षमताले आएका छन् । युवामा कोर्डिनेशनको अभाव छ । मैले धेरैसँग कोडिनेशन गरे, कतिपय अवस्थामा म अपमानित पनि भएको छ तर कोर्डिनेशनमा लागि रहे । राजनीतिकमा युवालाई अगाडि बढाउन भन्दै युवा नेताहरुको घर घर पुगेका थिए ।
युवाहरु राजनीतिकमा अगाडि नआउनुमा पार्टी नेतृत्वको कतिको हात छ ?
–नेतृत्वको पनि कमि कमजोरी छ तर युवा पंक्तिमा नै धेरै कमि कमजोरी रहेको छ, म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, मधेशको आन्दोलन सफल हुँदैन, यी नेताहरुले सफल हुन दिँदैन हामी युवाहरुले नै यसको नेतृत्व लियौं भन्दा कसैले मानेन । मैले एकजनालाई त आन्दोलनको नेतृत्व तपाई नै गर्नुस् पनि भनेका थिए तर उहाँले स्वीकार गर्नुभएन । एक त पार्टी नेतृत्वले युवालाई अगाडि बढाउन कुनै चासो लिएको छैन । तर, युवाले पनि आफै पनि प्रयास गर्दैनन् । पार्टीका नेताको मुख ताकेर बसेका हुन्छन् ।
तपाई महाधिवेशनमा नै पार्टीका अध्यक्षमाथि पूर्ण जिम्मेवारी दिनुभयो तपाईलाई लागेको थियो कि अध्यक्षले तपाईलाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनुहुन्छ भनेर ?
–मलाई हाम्रो अध्यक्षमाथि विश्वास थियो । यदि चुनाव भएको भए मैले इतिहास कायम गर्थे । सायद चुनाव भएको भए केन्द्रीय सदस्यमा सबभन्दा बढी मत आउँथ्यो । मेरो योगदानको चर्चा हुन्थ्यो महाधिवेशनमा थियो । मलाई दुख यति छ कि मैदानमा गएपनि कुस्ती खेल्न पाइएन ।
तपाईलाई विजय गच्छदारले दाया माया गरेर केन्द्रीय सदस्य बनाएको आरोप छ नि त ?
–यो त कुनै दाया मायाबाट पाएको होइन । म त्यस लायक भएका कारणले नै मलाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिनुभएको हो । पहिलो मधेश आन्दोलन र त्यसपछिको दिनमा पार्टीमा दिएको योगदानको कदर गरेर नै मलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको हो । कसैले टिका लगाई दिएको वा दाया माया गरेको जस्तो होइन । यदि म दाया मायाको भरमा भएको भए महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी नै दिने थिइन । म त चुनावकै पक्षमा थिए तर ठूला बडा नेताले अध्यक्षलाई नै जिम्मवारी दिएपछि आफू एक्लै कराएर के हुन्छ भनेर चुप लागे । त्यहीको परिणाम स्वरुप अहिले केन्द्रीय सदस्यमा चयन भएको हुँ ।
पहिलो लोटको मनोनयनमा तपाई पर्नु भएन किन ?
–हो, म पहिलो लोटबालामा परिन् तर किन परिन अध्यक्षले मलाई किन त्यही बेला ल्याउनु भएन । पक्कै पनि केही सोचेर नै नै त्यस्तो गर्नुभएको होला । मलाई विश्वास थियो कि अध्यक्षजीले ममाथि अन्याय गर्नु हुन्न । पहिलो लोटको केन्द्रीय सदस्य चयन गरेपछि अध्यक्षजीसँग मेरो पटक पटक कुरा भएको थियो कुरामा मलाई कहिले निराश गर्नुभएको थिएन ।
अब अर्को कुरा, मधेशी दल मधेशमा ६ महिनासम्म आन्दोलन गरे केही भएन अहिले आएर काठमाडौ केन्द्रीत आन्दोलन गर्दैछ यसमा तपाईको के धारणा छ ?
–संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चाले काठमाडौमा शुरु गरेको आन्दोलनलाई मेरो पूर्ण समर्थन छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको नमूना प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसले गर्दा मेरो समर्थन रहेको छ । आन्दोलनकारीले उठाएको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अब माग पूरा गराउन जति ढिलो हुन्छ त्यति अवस्था खराब हुन्छ । अब मधेशवादी दल काठमाडौबाट खाली हात जानु हुँदैन । सरकारले समयमा ख्याल पुर्याउनुपर्छ । काठमाडौले पनि बुझि सकेको छ कि मधेशीको माग जायज छ तर अब काठमाडौले पनि बोल्नुपर्छ ।
तपाईले आन्दोलनलाई समर्थन गर्नुभएको छ तर तपाईकै अध्यक्षले आन्दोलनको कुनै तुक छैन भन्नुभएको छ, फरक आयो त कुरा ?
–हाम्रो अध्यक्षले त्यस्तो भन्नु भएको छैन । मधेशको माग जायज छ शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ । सविधानलाई संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ । यदि त्यस्तो नभएको भए आफै सरकारको उपप्रधानमन्त्री भएर सरकारलाई ८ बुँदे ज्ञापनपत्र किन बुझाउनु हुन्थ्यो त । आठ बुँदे ज्ञापनपत्रमा कतै नकतै मधेशी मोर्चाले उठाउँदै आएको मागहरु पनि सम्बोधन गरिएको छ । हाम्रो पार्टी पनि मधेश आन्दोलनमा थियो । हाम्रो कार्यकर्ता पनि घाइते भएको छ । हाम्रो कार्यकर्ताको पनि निधन भएको छ । त्यसैले हाम्रो अध्यक्ष पनि आन्दोलनकारीको समस्या चाँडै समाधान होस् भनि चाहेका छन् ।
तपाईको पार्टीको सरकारको मुख्य अंग, मधेशको मागप्रति पनि सकारात्मक तर वार्ताका लागि किन पहल गरिरहेका छैन त ?
–त्यो नदेखिएको मात्र हो । भित्र भित्रै उहाँले निकै प्रयास गरिरहनु भएको छ । कतै नकतै मधेशवादी दलमा पनि कमि कमजोरी देखिएको छ । सरकारले तीन तीन पटक पत्र पठाएको छ तैपनि वार्तामा बस्दिन भनेका छन् । यसलाई अब के भन्ने । नियतमा पनि ध्यान दिनु होला । घाइतेलाई उचार, मृत्यू भएकालाई क्षतिपूर्ति, मुद्दा फिर्ता लगायका कामहरु भई नै रहेका छन् । मधेशका जिल्लाहरुमा जानुस् सिडियो कार्यालयहरुमा क्षतिपूर्ति दिने कामहरु भइरहेको देख्नु हुन्छ । अब कसैको कागज मिलेको छैन भने के गर्ने ? कसैको कुनै प्रमाण मिलेको छैन भने त्यो जुटाउने काम त सरकारले गर्दैनन् । सम्बन्धित पक्षले नै गर्नुपर्छ । र, यी कामहरुको लागि हाम्रो अध्यक्षजीले नै पहल गर्नुभएको छ । सरकारले पटक पटक पत्र पठाउनु हाम्रो अध्यक्षको देन हो । सायद वार्ताका लागि जोड दिने नेतामध्ये हाम्रो अध्यक्ष नै पर्नुहुन्छ । हाम्रो अध्यक्षले उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरसम्मको घरसम्म पुग्नु भएको छ । तर उहाँहरुले मान्नु भएन । नखरा देखाउनु भयो ।
जानकी जन्मजयन्ती मनाइँदैं
–हिमांशु चौधरी धनुषा १० गते । माता जानकीको जन्मजयन्ती भोलि प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरधाममा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदैंछ । माता जान...
एन्टाको चौथों सम्मेलन सम्पन्न
अमेरिका जेठ १५ गते । अमेरिकास्थित मधेशीहरुको सङ्गठन ‘एसोसिएशन अफ नेपाली तराईअन इन अमेरिका’ (एन्टा), को सम्मेलन यही मइ, २६, शनिवार न्यूजर्...